DAAWO VIDEO: Nin NABI Sheegtay oo Maxkamad Lagu Dhex Toogtey 7 Xabo Lagu Dhuftay Aflagadada Diinta | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO VIDEO: Nin NABI Sheegtay oo Maxkamad Lagu Dhex Toogtey 7 Xabo Lagu Dhuftay Aflagadada Diinta
Nin lagu eedeeyay inuu sheegtay nabinnimo ayaa toogasho lagu dilay isagoo ku jira gudaha maxkamad ku taalla dalka Pakistan, xilli uu dhageysiga dacwaddiisa ka socday magaalada waqooyi ee Peshawar.
Waxaa kiis maxkamadeed lagu soo oogay markii sida la sheegay uu isku dayay inuu dadka ka dhaadhiciyo inuu yahay nabi.
Sheegashada nabinimada iyo aflagaaddada loo geysto diinta Islaamka ayaa dalka Pakistan waxaa ciqaabteeda ay ka noqon kartaa dil.
Inkastoo wali aysan jirin cid ay dowladda u toogatay arrimahaas, haddana waxaa marar badan ay horseedaan inuu dhaco qalalaase iyo weerar.
Ninka la dilay, oo lagu magacaabi jiray Tahir Ahmad Naseem, ayaa sanadkii 2018-kii lagu soo eedeeyay inuu nabinimada sheegtay, waxaana eedeyntaas soo gudbiyay qof dhowr iyo toban jir ah.
Ilaa 1990, ugu yaraan 77 qof ayaa loo dilay eedeeymaha, sida laga soo xigtay war murtiyeed ka soo baxay Al Jazeera.
Toddobaadkii hore, golaha gobolka ee Punjab, oo ah gobolka ugu dadka badan Pakistan, ayaa meel mariyey sharci muran badan dhaliyay oo ku saabsan arrimaha diinta, iyagoo siiya awood balaaran dowladda si ay u tirakooto wax kasta oo la daabaco oo ku saleysan tilmaamo aan kala go ‘lahayn oo ku xadgudbaya aaminsanaanta diinta.
Kuwa la dilay waxaa ka mid ah dad lagu eedeeyay cay, xubnaha qoyskooda, iyo qareeno iyo garsoorayaal kuwaasoo siidaayay dadkii lagu eedeeyay dambiga.
Subaxnimadii saaka, oo Arbaco ah ayaa la dilay isagoo garsooraha hor taagan.
Muuqaal lagu shaaciyay baraha bulshada ayaa laga arkayaa meydkiisa oo saaran mid ka mid ah kuraasta maxkamadda.
Ninka weerarka dilka ah fuliyay ayaa durbadiiba lagu xiray goobta. Muuqaal kale ayaa laga soo duubay isagoo gacmaha ka xiran, oo ku qeylinaya ninka uu dilay, isagoo ku tilmaamaya “cadowga Islaamka”.
Mr Naseem waxaa markii ugu horreysay eedeeyay wiil lagu magacaabo Awais Malik, oo arday ka ah madaraso ku taalla magaalada Peshawar.
Sida lagu sheegay eedeynta, Mr Naseem ayaa wiilkaas khadka internet-ka kula hadlay isagoo ku nool waddanka Mareykanka.
Mr Malik, ayaa BBC-da u sheegay inuu markii dambe Mr Naseem kula kulmay dukaan ku yaalla magaalada Peshawar, si uu ugala sheekeysto waxa uu ka aaminsan yahay diinta, kaddibna uu booliska ku dacweeyay.
Naseem waxaa lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay qodobbada 295-A, 295-B iyo 295-C ee xeerka ciqaabta ee Pakistan, kaas oo ku saabsan cayda ka dhanka ah Islaamka, isagoo ku ciqaabaya waxyaabo kale, “sumcad xumo magaca Nabiga Quduuska ah ee Muxamed”.
Wuxuu intaas ku daray in uusan maanta goob joog ka ahayn maxkamadda, wax war ahna uusan ka heynin toogashada dhacday.
Ninka dilka geystay ayaa magaciisa lagu soo koobay Khaalid. Wali ma cadda sida ay ugu suurtagashay inuu maxkamadda dhexdeeda la galo hub.
Mr Naseem wuxuu ku dhashay dariiqada diimeed ee loo yaqaanno Axmadiya, oo looga dhaqmo meelo ka mid ah Pakistan, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ururka bulshada.
Laakiin wuxuu intaas ku daray inuu ka baxay dariiqadaas, uuna sheegay inuu nabi yahay.
Hoggaamiyaha bulshada ayaa xusay in Mr Naseem uu ahaa qof maskaxda looga jiro.
Dadka u dooda xuquuqqda aadanaha ayaa sheegay in gacanta birta ah ee lagu qabto dadka ku xad gudba diinta ay saameyso oo kaliya dadka kasoo jeeda bulshooyinka laga tirada badan yahay, lana dhiirrigaliyo weerarrada loo geysto dadkaas.
Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, tobannaan qof oo lagu eedeeyay arrimahaas ayaa lagu dilay kacdoon ay dad shacab ah sameeyeen.
Dhinaca kale, hadda waxaa baraha bulshada ee dalka Pakistan si weyn loogu hadal hayaa qof Twitter-ka isticmaala oo lagu eedeeyay inuu nabinnimo sheegtay. Dad badan ayaa u gooddinaya qofkaas.
Hase yeeshee, dad u cabsi qaba nabadgalyadiisa ayaa isku dayaya inay ka hor tagaan eedeymaha loo jeedinayo.
Previous articleDAAWO VIDEO:Muuse biixi oo si adag u hadlay” Tallaabo ayaan ka qaadeeynaa shaqsiyaadka qaban-qaabinaya”
Next articleMUUQAAL DEG DEG Turkiga oo Hanjabad Dagaal U Dirtay Imaraad Dhoolotus Military Soo Bandhigtay